Grande-Bretagne: 13.000 euros ny vidin’ny toerana 1 ho an’izay te hanatrika mivantana ny fotoana hiterahany. - Informations et Actualités sur Madagascar
International Grande-Bretagne: 13.000 euros ny vidin’ny toerana 1 ho an’izay te hanatrika mivantana ny fotoana hiterahany.
Grande-Bretagne: 13.000 euros ny vidin’ny toerana 1 ho an’izay te hanatrika mivantana ny fotoana hiterahany.
by Alpha world on 00 h 34 in International
Manao izay tsy tokony hatao avokoa ny olona rehetra rehefa te halaza. Tranga iray manamarina izany ity hita any Angletera ity.
23 taona i Josie Cunningha, ary te halaza maneran-tany ny faniriany. Noho izany ny mivarotra toerana amin’ ny olona izay te hanatrika mivantana ny fotoana hahaterahany no lalana fantany fa hahatongavany amin’izany haingana.
Sao dia mba liana ianao
Raha ny fantatra dia amin’ny volana Oktobra ho avy izao no hiteraka i Josie Cunningham ka 13. 000 euros na eo ho eo amin’ny 41 tapitrisa Ariary eo ny aloan’ny olona anankiray izay te hanatri-maso mivantana an’izany fotoana hahaterahany izany.
Tsy vitsy tokoa ny olona efa nisoratra anarana hatramin’izao.
By Alpha world at 00 h 34